မြန်မာအမျိုးသမီးများ နိုင်ငံခြားသားနှင့် လက်မထပ်ရ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မြန်မာအမျိုးသမီးများ နိုင်ငံခြားသားနှင့် လက်မထပ်ရ…
မြန်မာအမျိုးသမီးများ နိုင်ငံခြားသားနှင့် လက်မထပ်ရ…
Posted by lu ta lone on May 26, 2010 in Myanma News, News | 14 comments
လတလုံး အာဘော်... မြန်မာအမျိုးသမီးများ နိုင်ငံခြားသားနှင့် လက်မထပ်ရ...
မြန်မာအမျိုးသမီးများကို နိုင်ငံခြားသားနှင့် လက်ထပ် ထိမ်းမြားခွင့် မပေးရန် တရားရေး ဝန်ထမ်းများအား အာဏာပိုင်များက ညွှန်ကြား ထားသောကြောင့် မြန်မာ အမျိုးသမီးတချို့မှာ နိုင်ငံခြားသားများ၏ အငယ်အနှောင်း၊
တရားမ၀င်ဘ၀ဖြင့် အသိအမှတ် အပြု မခံရသည့် အခြေအနေများ ဖြစ်လာနေကြောင်း သိရသည်။
ယခင်က နိုင်ငံခြားသားများနှင့် မြန်မာအမျိုးသမီးများ လက်ထပ်မည်ဆိုလျှင် ပထမဦးစွာ တိုင်းတရားရုံးသို့သွားရောက်၍ မှတ်ပုံတင် ရပြီး ၂၁ ရက် ကြိုတင် အသိပေးကာ ၎င်း ၂၁ ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်သူ မရှိလျှင် တရားရုံးက လက်ထပ်ပေးသည့်
ဥပဒေ ရှိခဲ့ ကြောင်း ဦးအောင်သိန်းက ဆိုသည်။
“အဲဒီ ဥပဒေကိုတော့ အခုထက်ထိ မပယ်ဖျက်သေးဘူး၊ ဥပဒေအရ တားမြစ်ထားတာလည်း မရှိသေးဘူး၊ ဒါပေမယ့်
ညွှန်ကြားချက် နဲ့ ရပ်ဆိုင်းထားတယ်၊ တားထားတယ်ဆိုပြီး လက်ထပ်ခွင့်မပေးဘူး”ဟု သူကပြောသည်။
လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်ဝန်းကျင်က မြန်မာအမျိုးသမီးငယ် တဦးအား မိဘများက နိုင်ငံခြားသားတဦးဖြင့် အတင်းအကျပ် လက်ထပ်ပေး ခဲ့သည့်အတွက် အဆိုပါ အမျိုးသမီးငယ်မှာ ၎င်း၏ ချစ်သူဖြင့် ထွက်ပြေး၍ မိမိကိုယ်ကိုယ်အဆုံးစီရင်ခဲ့သဖြင့် ယင်း ညွှန်ကြားချက် ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရှေ့နေတဦးဖြစ်သူ ဦးကျော်ဟိုးက ပြောပြသည်။
“အဲဒီတုန်းက ဥပဒေ အရာရှိတယောက်က လက်ထပ်ပေးလိုက်တာ၊ အဲဒီကတည်းက နိုတြီလုပ်တဲ့ ရှေ့နေကအစ၊
ဥပဒေ အရာရှိ အကုန်လုံး နိုင်ငံခြားသားနဲ့ လက်ထပ်တဲ့ကိစ္စကို လုံးဝ လုပ်မပေးရဘူးဆိုပြီး စာထုတ်ထားခဲ့တာ”ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
“လူကုန်ကူးတာမဟုတ်ဘူး ၊ မရိုးမသား မဟုတ်ဘဲ ရိုးရိုးသားသားနဲ့ သားမှတ်မှတ် မယားမှတ်မှတ်ပေါင်းမယ်၊ နောက်ပြီး ကာယကံ ရှင် များကလည်း သဘောတူ ကြည်ဖြူကြပြီး တကယ်မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ ပေါင်းဖက်ကြတာဆိုရင်
ကန့်ကွက်ဖို့မရှိပါဘူး”ဟု အဆိုပါ စာရေးဆရာက ဆိုသည်။
တချို့မှာ ဗမာ့ဓလေ့ထုံးစံတွင် တရားရုံးလက်ထပ်မှ တရားဝင်သည် မဆိုနိုင်သောကြောင့် ထုံးတမ်း အစဉ်အလာများအတိုင်း ဘုန်ကြီး ရဟန်းရှေ့မှောက်တွင် ဆွမ်းဖ်ိတ်ကျွေး တရားနာယူကာ အသိအမှတ်သဘောဖြင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားသွားသည်
များ လည်းရှိကြောင်း ရှေ့နေ ဦးအောင်သိန်းကဆိုသည်။
“ဘယ်လူမျိုးရယ်လို့မဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ့်အပေါ်မှာ ဘယ်လို လူစားမျိုးလဲ၊ ကိုယ့်ကို အသုံးချနေတာလား ဆိုတာကို
မိန်းကလေး တယောက်အနေနဲ့ ရွေးချယ်နိုင်မယ်၊ သူ့ရဲ့ဘ၀ပေး ကုသိုလ်လည်းကောင်းမယ်ဆိုရင် သူ့အတွက်ကတော့ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ထပ်ယူနိုင်ပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတဦးနှင့် လက်ထပ်လိုက်သည်မှာ အိမ်ထောင်သက် ၁၁ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာအမျိုးသမီး တဦး ကလည်း“ကျမလည်း ဒီလို နိုင်ငံခြားသားနဲ့ လက်ထပ်ဖြစ်မယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မစဉ်းစားခဲ့ဖူးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် သူရဲ့ဖူးစာ၊
ကံတရားနဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ်၊ ဘယ်လိုလူမျိုး၊ ဘယ်လိုဘာသာမျိုးမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကိုယ့်အပေါ်မှာ နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ သစ္စာရှိဖို့ အရေးကြီး ပါတယ်၊ ကိုယ့်လူမျိုးချင်း၊ ကိုယ့်ဘာသာချင်းယူပြီး အဆင်မပြေကြတာတွေလည်း အများကြီးပါပဲ”ဟု ဆိုသည်။
ထိုကဲ့သို့ ဥပဒေနှင့်အညီ လက်ထပ်ခွင့်ရရန် ကြိုးပမ်းကြရသည့် မြန်မာအမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အခက်အခဲအများအပြားနှင့်
ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းကြရကြောင်း၊ ထိုသို့ နိုင်ငံခြားသားများနှင့် လက်ထပ်ပြီး အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေသူများလည်း ရှိသကဲ့သို့ အမှန်တကယ် ချစ်မြတ်နိုး၍ သစ္စာရှိရှိပေါင်းသင်းကြသူများလည်း ရှိကာ မိမိ၏ ကံတရားနှင့်လည်း
သက်ဆိုင်ကြောင်း ၎င်း၏ အတွေ့ အကြုံအရ ပြောပြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၀င်ရောက်လာကြသည့် နိုင်ငံခြားသားများအနက် တချို့သောနိုင်ငံခြားသားများသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူပွဲစားများနှင့် ဆက်သွယ်၍ မြန်မာအမျိုးသမီးများကို နည်းလမ်း အမျိုးမျိုးဖြင့် ဖြားယောင်း သွေးဆောင် နေကြကြောင်း Flower News ဂျာနယ်တွင် ရေးသားထားသည်။
ဖူးစာဆိုတာ တားမြစ်လို့ရတာမှမဟုတ်ပဲ တားမြစ်လဲ သူယူချင်ရင်ယူမှာပဲလေ ဆောင့်ထိန်းနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့
နိုင်ငံခြားသားဆိုတာ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်သွားတဲ့ မြန်မာတွေရောပါလားဟင်?
frc ဆိုတဲ ဧည့်နိုင်ငံသားတွေကော?
ဗမာ့သွေးစစ် ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလာတာပါလဲ???????
နိုင်ငံခြားသားမှ မဟုတ်ပါဘူး ဘာသာမတူ လူမျိုးမတူတာနဲ့ လက်ထပ်ဖို့က
ခက်ခဲနေတယ် နိုင်ငံသားတွေရဲ့ တရားဝင်လက်ထပ်ခွင့် ပိတ်ပင် နေသလို
ဖြစ်နေတယ်။ တိတ်တိတ်ပုန်းအားပေးတာမျိုးလား….တော့ မသိတော့ဘူး
la won nge says:
စည်းကမ်းချက်၊ ပေါ်လစီတစ်ခုစီမှာတော့ အားသာချက် အားနည်းချက်တွေ ပူးတွဲပြီးရှိနေနိုင်ပါတယ်၊ အခုခေတ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ ပုံသေသတ်မှတ်လို့မရနိုင်တာတွေ အများကြီးပါပဲ။မိန်းကလေးတွေ အနေနဲ့ကတော့ ပင်ကိုယ် အသိပညာ အပြင် စိတ်ဓါတ်ခံယူချက်တွေတင်မကပဲ ပတ်ဝန်းကျင်က ပါ ကိုယ့်ရဲ့ဘ၀ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ သတိလေးနဲ့ယှဉ်ပြီးနေတတ်ဖို့လိုတယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်၊တကယ်အချစ်စစ်မဟုတ်ပဲ စီးပွားတွက်နဲ့ အိမ်ထောင်ပြုကြမယ်ဆိုရင်တော့ ကံတရားလို့ပဲပြောရမလားပဲ၊
အမေရိကန် တွေက တော့ လူမျိုးခြားတွေကို တအားခေါ်နေတယ်နော် ..
ပီးတော့ ကြားဖူးတယ် .. လူမျိုးခြားတွေ လက်ထပ်လို့ ရလာတဲ့ ကလေးက ပိုပီးတော့ ဥာဏ်ကောင်းတယ်လို့
ဖူးစာဆိုတာ ပိတ်ပင်လို့မရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဦးရာဆိုပြီးအတင်းလုပ်ရင်တော့ လည်းမဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့။ တကယ်တော့ အမှန်တကယ် ချစ်ကြ ကြိုက်ကြရင်တော့ ခွင့်ပြုသင့် ရင်ခွင့်ပြုရမှာပေါ့လေ။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် မသမာရင်တော့လည်း ……………….
အချစ်မှာ မျက်စိမရှိတဲ့..။ အချစ်မှာ မရှိတာလား တဏှာမှာ မျက်စေ့ မရှိတာလားမသိဘူး…။
ဟုတ်မှလည်း လုပ်ပါ မောင်ရင်ရယ်။
စက်မှုဇုန်နီး ရပ်ကွက်တွေမှာ ရပ်ကွက် လူကြီးမင်းများရှေ့ မှောက်မှာ ဗမာမတွေက တရုပ် ၊ ကုလား ၊
အင်ဒို ၊ ကိုရီးယား ၊ ဂျပန် တွေနဲ့လက်ထပ်နေကြတာ။ လက်ထက်ဖို့ တန်းစီနေတဲ့ ကောင်မတွေလဲ
ဒုနဲ့ ဒေး။ မအေပေးတွေကလဲ ဗမာပြည်မှာ အလုပ်လုပ်တုန်း ဖာဘိုး သက်သာအောင် လုပ်နေတယ်။
အဲဒီလို လူမျိုးခြားနဲ့ ရတိုင်း အမျိုးပျက်တော့ မပြောသင့်ပါဘူး။ဒါကဖူးစာရဲ့ သတ်မှတ်ချက်ဘဲပြောရမှာပေါ့။ကံတရားနဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ်၊ ဘယ်လိုလူမျိုး၊ ဘယ်လိုဘာသာမျိုးမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကိုယ့်အပေါ်မှာ နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ သစ္စာရှိဖို့ အရေးကြီး ပါတယ်၊ ကိုယ့်လူမျိုးချင်း၊ ကိုယ့်ဘာသာချင်းယူပြီး အဆင်မပြေကြတာတွေလည်း အများကြီးပါပဲ”ဟု ဆိုသည်။
င်္လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက် က တားမြစ်တာ မှန်ပါတယ်။ အင်းလေးက ဟိုတယ်တွေ ဗမာမ နဲ့ နိုင်ငံခြားသား တစ်ခန်းထဲ တွေ့ ရင် ဟိုတယ်လိုင်စင် ပိတ်ပြစ်မယ် ။ မန်နေဂျာ ထောင်ချ ခံရမယ်ဆိုပြီး တိုင်းကခေါ်ကြိမ်း တာ ခံကြရဘူးလို့ တစ်ချို့ ဟိုတယ်တွေ အခုထိ လက်မခံတဲ့ ဟိုတယ်တွေ့ရှိပါတယ်။
သူ တိုဟာသူတို့ ဘယ်မှာ လက်ထပ်ထားထား အ သိအမှတ်မပြု ဘူး ။ခလေးတောင် ရ နေ ပါနေ လည်းဂရုမစိုက်ဘူး လက်မခံရ ဆိုပြီး ခေါ်ကြိမ်းတာပါ။ ညကျမှ အခန်းကူးရင်လည်း မန်နေဂျာတာဝန်တဲ့။